ပါကစ္စတန်မှာ ဘာသာရေး စော်ကားမှုနဲ့ ရုံးထုတ်လာတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသား သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံရ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း ပါကစ္စတန်မှာ ဘာသာရေး စော်ကားမှုနဲ့ ရုံးထုတ်လာတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသား သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံရ
Police officers gather at an entry gate of district court following the killing of Tahir Shamim Ahmad, who was in court accused of insulting Islam, in Peshawar, Pakistan, Wednesday, July 29, 2020. A young Pakistani Muslim walked intoacourtroom in the northwestern city of Peshawar and shot and killedafellow Muslim Ahmad, who was on trial for blasphemy,apolice officer said. (AP Photo/Muhammad Sajjad)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ဘာသာရေး စော်ကားမှုနဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသားကို ရုံးထုတ်လာစဉ် တရားရုံးမှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့က ပက်ရှ်ဝါမြို့ရှိ တရားရုံးမှာ လူတစ်ယောက် ဝင်လာပြီး တရားသူကြီးတွေ ရှေ့မှာပဲ အမေရိကန် နိုင်ငံသား တာဟီ အာမက် နက်ဆင် (၄၇ နှစ်) ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့တာပါ။ သေနတ်နဲ့ ပစ်သူကို အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာပဲ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
နက်ဆင်ဟာ ပါကစ္စတန် ဥပဒေအရ သေဒဏ် ဒါမှမဟုတ် တစ်သက်တစ်ကျွန်း ကျခံရနိုင်တဲ့ ဘာသာရေးစော်ကားမှုနဲ့ စွပ်စွဲ ရုံးတင်ခံရတာပါ။
နက်ဆင် သေဆုံးမှုဟာ တုန်လှုပ်စရာ၊ ဝမ်းနည်းစရာ၊ နာကျည်းစရာ ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အီလီနွိုက်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်ပြီး ပါကစ္စတန်ကို လာရောက်စဉ် ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ နက်ဆင်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ အဖမ်းခံရကတည်းက အမေရိကန် သံရုံးက လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေ ပေးနေတာပါ။
ပါကစ္စတန် တရားရုံးတွင်းမှာ အသတ်ခံရတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသား တာဟီ နက်ဆင်ရဲ့ မိသားစုအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း၊ အခုလို သတ်ဖြတ်မှုအတွက် အမြန်ဆုံးအရေးယူပေးဖို့ ပါကစ္စတန်ကို တိုက်တွန်းကြောင်း၊ အခုလို ရှက်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်မျိုး ထပ်မဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တောင်နှင့် ဗဟိုအာရှရေးရာ ဗြူရိုရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစောင့အြကပွတြှေ ခထွားတဲ့ တရားရုံးထဲကို ကညွဖြှည့ထြားတဲ့ သနတြေ ဘယလြို သယလြာသလဲဆိုတာ ရဲတှကေ စုံစမြးစဈဆေးနပေါတယြ။ ပါကဈစတနမြှာ သနတေကြိုငဆြောငဖြို့ ခကခြဲပှီး လိုငစြငမြရှိဘဲ သနတြေ ဝယယြူခှင့ြ မရှိပါဘူး။
ပါကစ်စတနျမှာ ဘာသာရေး စောျကားမှုနဲ့ ရုံးထုတျလာတဲ့ အမရေိကနျ နိုငျငံသား သနေတျနဲ့ ပဈသတျခံရ
အစောင့်အကျပ်တွေ ချထားတဲ့ တရားရုံးထဲကို ကျည်ဖြည့်ထားတဲ့ သေနတ် ဘယ်လို သယ်လာသလဲဆိုတာ ရဲတွေက စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ ပါကစ္စတန်မှာ သေနတ်ကိုင်ဆောင်ဖို့ ခက်ခဲပြီး လိုင်စင်မရှိဘဲ သေနတ် ဝယ်ယူခွင့် မရှိပါဘူး။
Previous articleUNHCR နဲ့ WFP တို့က COVID-19 ရောဂါပိုး စမ်းသပ်ကိရိယာတွေ ထောက်ပံ့ကူညီ
Next articleရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းဖို့ သမ္မတ ထရမ့် ပြောဆိုမှု ရီပတ်ဘလီကန်တွေ လက်မခံ